Safal Khabar - रविसहितका तिन जना आज छुट्लान त ? अभियोग पत्र अदालत पेस हुँदै
रविसहितका तिन जना आज छुट्लान त ? अभियोग पत्र अदालत पेस हुँदै
आइतबार, ०८ भदौ २०७६, ०९ : ५३
चितवन । न्यायिक हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेसहित युवराज कंडेल र अस्मिता कार्किमाथीको अनुसन्धान सकिएको छ । चितवन जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक थप गरेको ५ दिनको समय अवधिभित्रै प्रहरीले सवै अनुसन्धान सकाएको हो ।
आज रविसहित युवराज कंडेल र अस्मिता कार्किलाई प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाने छ ।